१० फाल्गुन २०७६ शनिबार Saturday, February 22, 2020
KATHMANDUTemperature 20°CAir Quality153
केपी–राजेन्द्रको यो नयाँ सम्बन्धचाहिँ कहिलेसम्म चल्छ, त्यो भने अलि पछि मात्रै थाहा लाग्ला ।
१४ पुस २०७६ सोमबार
अहिले देशमा सम्बन्धको खडेरी छ । कोसाग कसको के सम्बन्ध छ र त्यो कहिले टुट्छ, केही भन्न सकिने अवस्था छैन । समाजमा अहिले त्यस्ता सम्बन्ध अस्तित्वमा आइरहेका छन्, जसको न कुनै नाम छ, न त कुनै नाम दिन मिल्छ । जस्तो, केपी ओली र उपेन्द्र यादवकै सम्बन्धको कुरा गरौँ । कुनै बेला यी दुई भनेका नदीका दुई किनारजस्तै थिए । भेटको कुनै सम्भावनै छैन । तर सम्भावना नभएर के भयो, भेट त भयो । भेट पनि यस्तरी भयो कि दुई जनाको सम्बन्धले हेर्दाहेर्दै नयाँ रुप लिन पुग्यो । अर्थात्, सम्बन्ध गाढामाथि गाढा हुादै गयो । र, स्थिति यहाँसम्म भयो कि दुई जना ‘लिभिङ टुगेदर’ को रिलेसनमा पुगे । अहिले लिभिङ टुगेदर समाजको ‘कमन कल्चर’ भइसक्यो । केपी र उपेन्द्र पनि यसबाट मुक्त थिएनन् । यदि दुवै जनाको घरले अनुमति दिएको भए बिहै हुनेसम्मको अवस्था थियो । तर त्यो हुन पाएन ।
सम्बन्ध राम्रै चलिरहेको थियो । तर केही समय ‘लिभिङ टुगेदर’ मा बसेपछि उपेन्द्रलाई लाग्न थाल्यो कि केपी अचेल केही बदलिएका छन् । उनलाई कम मात्रै ध्यान दिन थालेका छन् । उनले भनेको मान्न पनि छाडेका छन् । भोगविलासको सम्बन्धमा सायद हुने यस्तै हो ।
केपीको स्वभावमा बदलाव आएपछि उपेन्द्र सतर्क हुन थाले, आखिर केपीको चक्कर के हो ? एउटै रुम सेयर गरेर बसेका छौँ तर पनि यो बेपर्वाह किन ? पछि खोतल्दै जाँदा थाहा भयो, केपीको आाखा त उपेन्द्रकै बगलवाला राजेन्द्रसँग पो चुम्बकीय शैलीमा आकर्षित भइसकेको रहेछ । कोठामा उपेन्द्र हुँदाहुँदै बाहिरचाहिँ केपी राजेन्द्रसँग नजिक भइसकेका रहेछन् । यसलाई सम्बन्धमा आएको नयाँ मोड भन्नुपर्ला । यस्तो कुरा उपेन्द्रलाई मन पर्ने कुरै भएन । केपीको जिन्दगीमा अर्कै आएपछि उपेन्द्रले पनि चुपचाप रुम त्यागे । केपीको रुम त्यागपछि अहिले उनी पुन: ‘सिंगल’ भएका छन् । केपीचाहिँ अर्कैसँग लिभिङ टुगेदरमा गएका छन् । केपी–राजेन्द्रको यो नयाँ सम्बन्धचाहिँ कहिलेसम्म चल्छ, त्यो भने अलि पछि मात्रै थाहा लाग्ला ।